Vorontsiloza " Journey-Assist - Internet any Tiorkia
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Eoropa » vorontsiloza
Fampahalalana ankapobeny. Inona no tokony hatao any Turkey
Vola Tiorka. Fifanakalozana fifanakalozana. Bank sy ATM
Fiantsenana ao Turkey. Seveniry
Serasera finday any Tiorkia
Loza any Torkia
Inona no tokony hatao any Turkey
Malaza amin'ny mpizahatany i Tiorkia noho ny morontsiraka tsara tarehy amoron-dranomasina efatra, Istanbul mahafinaritra, loharano mafana an'ny Yalova, trano fialam-bolan'ny orana any Pamukkale, ny monasikan'i Cappadocia ary ny fotoana lehibe indrindra amin'ny fiantsenana.
Ity firenena ity dia iray amin'ireo toby malaza indrindra amin'ireo mpizahatany avy amin'ny USSR taloha sy Eoropa Andrefana. Io fanavahana ny vidiny mora, serivisy serivisy ary ranomasina mafana mandritra ny enim-bolana isan-taona. Ny fialan-tsasatra any Tiorkia dia tia ny tora-pasika sy ireo izay liana amin'ny fitsangatsanganana fampianarana, ary koa ny fialamboly isan-andro. Ity firenena ity dia mety indrindra amin'ny fitsangatsanganana ho ampahany amin'ny fianakaviana manontolo, satria ho an'ny ankizy (anisan'izany ny ankizy kely) ny toe-javatra tena mety sy mahafinaritra no omena eto.
Zava-dehibe fa i Torkia no firenena mora azon'ny mpizahatany avy any aorian'ny USSR aorian'ny trano fandraisam-bahiny. Ankoatr'izay, ny kalitaon'ny serivisy any Torkia dia matetika no avo kokoa. Amin'ny indostrian'ny fizahantany, malaza eto ny endrika mampiditra rehetra, izay ahafahanao mankafy ny fialan-tsasatrao tsy misy ahiahy tsy ilaina, mandoa indray mandeha fotsiny, eo am-piandohana.
Ny toeram-pialan-tsasatra Tiorka dia mety ho an'ny rehetra - ho an'ny mpivady, ny fianakaviana manan-janaka, ary ny zokiny. Ny tanora dia ho tia ny fiainana amin'ny alina, gourmets - sakafo Tiorka (manokana, ny vatomamy malaza eo an-toerana), shopaholics - karazana entana avo lenta.
Morontsiraka any Tiorkia
I Torkia dia manana moron-dranomasina manga 459 hatrany. Eto ianao dia afaka milomano amin'ny ranomasina efatra, ary miala sasatra amin'ny hamam-panahy Tiorka tena izy. Faly ireo toerana fandraisam-bahiny Tiorka manolotra tora-pasika amin'ny karazany rehetra: misy vatokely, fasika sy faritra mifangaro, ary torapasika eny an-tampon-kavoana. Ny ankamaroan'izy ireo dia feno mpizahatany mandritra ny vanim-potoanan'ny fizahan-tany, saingy misy ihany koa ny morontsiraka dia ho an'ireo maniry hisotro ronono.
Eto amin'ity firenena ity dia afaka mandinika fitambaran-javaboary tokana sy atsinanana, tsangambato byzantine mahaliana sy mahafinaritra manintona ianao.
Fotoana fizahan-tany any Tiorkia
Tonga any Torkia mandritra ny taona ny mpizahatany. Amin'ny fahavaratra dia milentika amin'ny vahoaka marobe eny amoron-dranomasina izy ireo. Amin'ny ririnina, miandry toeram-pialofana ny ski resort - Sarikamysh, Palandoken, Uludag.
Ho an'ireo tia ny natiora dia manana ny tahirin-javaboary sy zaridainam-pirenena misy zavamaniry manankarena. Ary ho an'ny fanasitranana any Tiorkia, loharano mafana, ohatra, Sivas, miasa.
Ny mpankafy ny asa ivelan'ny any ivelany dia afaka mankafy ny fitsangatsanganana an-tendrombohitra, mikoty, ny filokana, ny zach, ny fisakafoanana ary ny fihazana.
Ao amin'ny morontsirak'i Tiorka Mediterane, manjaka ny karazan-toetr'andro, izay miavaka amin'ny fahavaratra mafana sy ny ririnina mafana. Ny volana mangatsiaka indrindra dia ny Desambra, Janoary, Febroary. Ny salan'isa antonony amin'ny alina mandritra io vanim-potoana io dia +7, ary mandritra ny andro +15. Matetika ny hafanana dia manomboka eto amin'ny volana jona ary maharitra hatramin'ny septambra. Ny mari-pana amin'ny alina mandritra io vanim-potoana io dia eo amin'ny +21, amin'ny andro +32. Na izany aza, ny mari-pana amin'ny ranomasina dia tsy hidina ambany +17 na amin'ny ririnina aza ary manjary ambony indrindra (hatramin'ny +26) amin'ny Jolay, Aogositra ary Septambra.
Amin'ny morontsiraka avaratra (Ranomasina Mainty) any Tiorkia, malefaka kokoa ny toetrandro. Ny vanim-potoana mangatsiaka indrindra dia manomboka amin'ny volana Janoary ary mifarana amin'ny volana martsa. Mandritra io vanim-potoana io, ny mari-pana eo amin'ny alina dia +4, ary amin'ny andro +11. Ny vanim-potoana mafana indrindra dia manomboka amin'ny volana Jona ary mifarana amin'ny volana Aogositra. Amin'izao vanim-potoana izao, amin'ny alina, ny mari-pana, amin'ny maha-fitsipika azy, dia tsy latsaka ambanin'ny +15, ary mandritra ny andro dia mitentina +25 degre. Ny volana Jolay sy aogositra dia asiana fihenan-tena farafahakeliny indrindra (eo ho eo amin'ny 32 mm eo ho eo isam-bolana), amin'ireo volana ireo dia misy orana tsotra fotsiny 5-6.
Karazana toetrandro kontinanta antonony no manjaka eo afovoan'i Torkia. Mafana sy maina ny fahavaratra eto, mangatsiaka ny ririnina. Amin'ny volana ririnina dia midina hatramin'ny -4 ny mari-pana amin'ny alina, ary eo amin'ny +3 ny mari-pana amin'ny andro. Ny volana mafana indrindra dia ny volana jona, jolay, aogositra ary septambra. Amin'ny alina mandritra io vanim-potoana io, ny mari-pana dia +14, ary mandritra ny andro + 30.
Any atsinanan'i Torkia, indrindra any amin'ny faritra be tendrombohitra, dia miharihary kokoa ny fifanoherana amin'ny mari-pana. Misy faritra miaraka amin'ny toetrandro kontinanta maranitra. Manomboka amin'ny Novambra ny ririnina ary mifarana amin'ny Mey. Ny volana mangatsiaka indrindra dia ny volana Janoary sy Febroary. Amin'izao fotoana izao, -12 ny mari-pana amin'ny alina, ary -3 ny andro antoandro. Ny volana mafana indrindra dia ny Jolay sy Aogositra (salan'isa +11 amin'ny alina, ary +26 mandritra ny andro).
Weather in the region of Turkey now + pronoz
Vola any Tiorkia. Fifanakalozana fifanakalozana. Banks. Masinina ATM. Fandoavana karatra
Ny vola Tiorka dia antsoina hoe lira. Ny lira 1 dia mizara 100 kurus. Ny lira tiorka maoderina dia nampidirina nandritra ny antokom-pinoana tamin'ny 2005. Ankehitriny, mivezivezy dia misy taratasim-bola misy antokom-pirazanana 5, 10, 20, 50, 100 ary 200 lira, ary koa vola madinika misy antokom-pinoana 1, 5, 10, 25, 50 kuruş ary lira 1.
Any amin'ny ankamaroan'ny firenena, ny liras Tiorka ihany no ekena amin'ny fandoavam-bola amin'ny andrim-barotra sy serivisy serivisy. Amin'ny trano fandraisam-bahiny mpizahatany, dolara sy Euros dia ekena matetika, fa ny vidin'ny lira dia avadika amin'ireto vola ireto, matetika amin'ny taha tsy ratsy ho an'ny mpividy.
Tsara kokoa ny mitondra vola sy euros amin'ny vola any Turkey ho takalon'ny lira. Betsaka ny fifanakalozana no manaiky rubles Rosiana, fa amin'ny ankamaroan'ireny dia ratsy ny fifanakalozana fifanakalozana ruble.
Farafahakeliny 90% an'ny fivarotana tiorka sy ny fananganana katerizy dia azo aloa amin'ny karatra Mastercard na carte Visa. Betsaka ny ATM eto amin'ity firenena ity, saingy hatramin'ny taona 2019 dia nisy ny vaomiera 4-8% tamin'ny famatsiam-bola amin'ny banky hafa.
Converter - Kajy vola. Taham-panakalo any Torkia ankehitriny.
Fiantsenana ao Turkey
Ny fiantsenana any Torkia dia hetsika mampientanentana sy mahaliana, izay mety hitondra valisoa sy tombontsoa lehibe koa.
Entana Tiorka maro no be fangatahana eo amin'ireo mpizahatany. Ireo dia, ohatra, vokatra vita amin'ny volony sy hoditra (kitapo, fehikibo, palitao, akanjo volom-borona). Ny vokatra vita amin'ny landihazo dia malaza ihany koa - akanjo, kojakojan-tokantrano, lambam-pandriana, lamba famaohana.
Ny firavaka tiorka dia malaza koa. Manintona mpividy vahiny izy roa noho ny kalitaony sy ny vidiny tsy misy fepetra.
Ao amin'ny tsenan'i Tiorka dia tokony mahazo mifanara-barotra amin'ny fividianana ianao. Mandritra ny tolotra, azonao atao ny mampihena in-droa amin'ny vidiny in-2. Fa ny mpivarotra dia hahatsapa ny fandavan'ny mpivarotra ho tsy fanajana azy.
Mivoatra tsara ny fifandraisana finday sy ny Internet any Torkia. Amidy eto ny karatra SIM isaky ny mandeha. Na izany aza, ny vidin'ny karatra iray dia samy hafa be amin'ny toerana sy toerana hafa. Amin'ny seranam-piaramanidina dia mety mitentina 100 liras ianao, ary ao an-tanàna - 50 liras. Ireo mpivarotra koa matetika dia manandrana mandresy lahatra azy ireo hividy fonosana fifandraisana amin'ny finday izay tsy dia mety loatra aminao.
Noho izany antony izany dia tsy maintsy eo no ho eo ianao na dia eo amin'ny salon ny serasera, alao antoka fa voalamina tsara ny serivisy rehetra. Voalohany indrindra dia mihatra amin'ny Internet finday.
Tiorka manana rafitra CEIR manokana. Izany dia ahitana ny hoe ireo telefaona finday izay mifandray amin'ny nomerao IMEI amin'ny tambajotra Tiorka ihany no afaka miasa eto amin'ity firenena ity. Mba hanaovana izany amin'ny telefaona, mila mandoa ny sarany mety ianao. Azonao atao ihany koa ny mividy telefaona vaovao any Turkey.
Fiarovana amin'ny turkey
Ankehitriny i Turkey dia azo antsoina hoe fanjakana tena azo antoka. Raha ny resaka izay, tsy dia ambany noho ny any Eoropa Andrefana izy io. Ny tahan'ny heloka bevava eto dia ambany noho ny, ohatra, any amin'ny Federasiona Rosiana, Ukraine, Etazonia ary firenena Aziatika maro. Any Torkia, afaka mandehandeha eraky ny tanàna ianao amin'ny alina. Raha tsy vitan'ny mahazo vintana ny namoy ny telefaona eny an-dalana ianao, miaraka amin'ny fahafaha-manao avo lenta ny olona nahita azy dia hamerina azy io aminao raha miantso ny laharana anao manokana ianao ary mandray anjara amin'ny takatry ny findainao.
Mampiavaka ny mponina eto (indrindra fa ny trano fandraisam-bahiny) ny hatsaram-panahiny sy ny hatsaram-panahiny. Ny ankamaroan'ny Tiorka dia mahafantatra anglisy betsaka na latsaka, ary maro koa no miteny Rosiana (farafaharatsiny amin'ny ambaratonga fototra). Noho izany, ny mpizahatany dia afaka miantehitra amin'ny fifandraisana ara-dalàna amin'ireo mponina eo an-toerana, raha ilaina, ohatra, mba hahitana zavatra manan-danja, hitadiavana zavatra, sns.
Na izany aza, tokony mbola manaraka ny fitsipika sasany momba ny fitondran-tena ianao mba hisorohana ny olana. Indrindra indrindra ny vehivavy dia tsy tokony miditra ao an-tanàna, satria mandeha irery amoron-dranomasina. Amin'ity tranga ity, ny lehilahy Tiorka dia afaka mahita anao ho vehivavy tena mahamendrika ary mety hanomboka hihetsika aminao. Ny voalohany hanomboka hifandray amin'ny vahiny dia tsy rehefa miaraka aminy ihany. Tena kivy tanteraka ny milaza ny Tiorka fa ratsy ny Ataturk (manana ny maha izy azy manokana ny firenena) ary mazava ho azy ny momba ny Islamo.
Teny ofisialy - Tiorka
Renivohitra - Ankara
Fivavahana ofisialy - fanjakana tsy ara-dalàna
Kaody finday: 90 +
Sarintany amin'ny turkey